Ingabe ukuqina kukaTrump ngokubhekelela eChina kungukuqala kokuwa kwedola nokuwa komnotho? : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-18 May 2020	• 10 Amazwana
Ngokukhishwa okulandelanayo okujwayelekile kwegolide kanye nokwejwayelekile kawoyela, idola lajika laba yimali ezoprintwa ngaphandle kwemikhawulo. Siyibiza ngemali yeFiat. Imali yeFiat ayilungile ngokuhweba kwamanye amazwe. Ngemuva kwakho konke, ukuphrinta amakhulu ezigidigidi kubangela ukwehla kwemali.
Ngenxa yokuthi ibhange eliphakathi lase-US (i-Fed) lilawula le nqubo yokudalwa kwedola futhi i-dollar iyindlela ejwayelekile kwezohwebo lwamanye amazwe, lokhu kwehla kwedola nakho kunomthelela ekunciphiseni kwezinye zezimali, kufaka phakathi i-euro.
Njengoba intengo yomgqomo kawoyela ihamba kabi okwesikhashana (okwakusho ukuthi uthole imali yokuthenga uwoyela) emavikini asanda kwedlula, kuyinto enhle ukuthi lowo mafutha awuseyona indinganiso. Amafutha azothathelwa indawo i-toy Gates entsha kakhulu (uBill Gates)ukukhanya kwelanga ukwenza i-hydrogen yezinjini zokuhlanganisa).
Ukuphela kwesizathu esenza sisale nalutho olungamukeleki-olusembozwe yi-US hegemony yezempi (kuze kube manje). I-NATO iphoqa wonke amazwe noma umholi ukuba afulathele idola. Bekulokhu kungenelela njalo ngamabhomu kanye namabhomu nokuhlanza umholi.
Yugoslavia 90s. Akukabi noma yisiphi isikweletu (ngakho-ke dollar elizimele). Ibutho lakho elinamandla (hhayi ilungu le-NATO futhi cha. 4 ngokuya ngamandla wamasosha emhlabeni). Ngemuva kokushona kukaTito, abantu baqala ukubambana ngezihluthu beqala impi eyayizodiliza izwe, yavumela i-IMF ukuthi ingene futhi ibolekise imali yokwakha kabusha (ukuxhomekeka kwedola).
E-Iraq, uSaddam Hussein wayefuna ukuhweba uwoyela ngama-euro. Ngakho-ke hlanza.
ELibya, uMoammar Mohammed al-Qadhafi wayefuna idinari yase-Afrika egodliwe emuva ukuze akhulule ukuxhomekeka kwedola. UTidy futhi ucocekile.
Manje njengoba impi eSyria ikhombisile ukuthi amandla e-NATO (amathoyizi aseMelika) ayisabalulekile kangako, ngakho-ke ukuqala kokuphela kwezinga ledola lomhlaba. Amazwe amaningi ngokwengeziwe afubukela e-US, futhi impendulo kaDonald Trump kuphela umugqa onamandla: izimpi zokuhweba. Futhi manje - ngesimo se-coronavirus - ubuyela emuva ekuqhubekeni nokwenyuka kwe-China bashing. Engxoxweni yakhe yokugcina no UFOX News uzishilo futhi ukuthi ufuna ukuhlukanisa wonke amathayi neChina.
Ngamarekhodi, kubalulekile ukwazi ukuthi uhulumeni waseChina ukwazile ukugcina umnotho wawo uzimele noma ungaphansi kwedola. Idola lelo belisetshenziselwa ukuhwebelana kwamazwe aphesheya, kepha ibhange eliphakathi laseChina belilokhu lithenga amadola ezinkulumweni zezwe futhi likwazile ukugcina i-yuan yaseChina iqinile emingceleni yayo.
Ngaphezu kwalokho iChina inomthelela omkhulu kwezomnotho emazweni amaningi emhlabeni jikelele futhi iphrojekthi yaseChinese Belt and Road Initiative (BRI) iqinisekisa ukusebenzisana namazwe ayi-120 nezizwe ezinkulu ezingama-40. Lokho kwenza lawo mazwe nezinkampani kuncike kakhulu eChina.
Lapho uDonald Trump ememeza ethi ufuna ukuyilahla ngokuphelele iChina, kufana kakhulu nesenzo sakamuva sokuphelelwa yithemba ngamandla amakhulu aphelelwa ngamandla. Ngenkathi uTrump enza sengathi intukuthelo yakhe ihlobene nendlela yaseChina yokulwa negciwane le-corona, isizathu sangempela sokuphoxeka kwakhe kungenzeka ukuthi idola selizolahlekelwa izinga lokuhweba kwalo futhi i-yuan yaseChina iyathola amandla.
I-China yethule eyodwa ngaphakathi kwemikhawulo yayo imali entsha ye-cyber izindlela zokukhokha: i-e-RMB (iRen Min Bi, okusho ukuthi 'imali yabantu'). Le e-RMB njengamanje iyahlolwa emadolobheni amaningana aseChina, kufaka phakathi iShenzhen, iSuzhou, iChengdu neXiong'an. Kula madolobha, i-e-RMB icishe yamukelwe yonkana ukukhokhelwa kwamaholo, izinto zokuhamba zomphakathi, ukudla kanye nokuthengwa ezitolo eziningi. Uhlelo luxhumeke ku-WeChat ne-AliPay (wase-Alibaba). Le mali entsha ihlanganiswa yi-Chinese Central Bank.
I-IMF isungule umgomo wamalungelo akhethekile wokudweba ngonyaka we-2016, lapho "khona imali yakudala" okudala uhlobo lwesipele lwale nqubo entsha ye-SDR cryptocurrency. Inkinga kulelinyathelo le-IMF, noma kunjalo, ukuthi idola lakha ama-41,73% abelana ngaphakathi kwalesi silinganiso esisha se-cryptocurrency, kuyilapho i-yuan yaseChina inesabelo esingu-10.92% kuphela (i-yen yen 8.33%, iphawundi laseBrithani i-8.09%, i-euro engu-30.93%). Ngakho-ke ngenkathi umnotho waseChina ususondele ukuba ngumnotho onamandla emhlabeni, isabelo se-IMF crypto standard (i-SDR) sincane ngokungajwayelekile.
Ngakho-ke empeleni ikhona impi yezimali eqhubekayo; impi ehambisana nokubeka indinganiso entsha yemali. Idola kubukeka sengathi liphelelwa amandla futhi nenhlupheko ye-corona inikeze umfutho wokugcina, njengoba umshini wokukhipha imali awukaze ugijime ngokushesha kangaka. Manje lokho kuyisaga, ngoba ayikho imali ephrintiwe. Inani kuphela kwikhompyutha elikhulisiwe.
I-yuan yaseChina ibonakala iya ngokuqina, kuyilapho idola lilahlekelwa inani elithe xaxa.
Umbuzo manje ukuthi ama-multicalals kanye namabhange afuna ukusuka endaweni ejwayelekile yedola aye kumazinga ama-yuan noma ngabe kufanele kube khona uhlobo oluthile lwendabuko yegolide yomhlaba wonke. I-SDR njengezinga le-crypto akubonakali ukuthi iyisinqumo esithembekile noma, ngoba ngokuncipha kwedola, leyo SDR nayo iwa nayo (ngenxa yengxenye yedola engu-41,73% kuleyo SDR). Ngakho-ke kufanele ususe ithonya lemali ye-fiat (imali ephrintiwe) njengesisekelo sohlelo lwezezimali lomhlaba jikelele.
Idola kubukeka sengathi selifikile isikhathi salo sokuphela. Umnotho e-US nase-Europe uzothinteka kanzima ezinyangeni ezizayo ngemiphumela yenkinga yamakhorali. Amanani ezitolo ezinkulu asivele enyuka. Izinkampani eziningi zizowa ngaphezulu ngoba sekubhalwe amakhulu ezinkulungwane, lokhu kuncipha kwemali kuzobonakala kubo bonke abantu ezinyangeni ezizayo. Abantu abasenayo imali ethile bazoqala ukukhathazeka.
Eqinisweni, isimo sembubhiso silindele izinkampani eziningi kanye nabasindisi. Ngokuwa kwedola, igolide libonakala lukuphela kwesiphephelo, ngoba inani legolide emhlabeni livame ukusetshenziselwa ukumboza imali ngesikhathi sokusethwa kwemali.
Kodwa-ke, i-bitcoin nayo ibonakala ikhulisa ngokwengeziwe leyo ndawo ephephile. Njengoba kusengozini enkulu yokuwa kwamabhange okuwa (ngoba izinkampani ezingabizi kanye nabantu abangasakwazi ukukhokha iimalimboleko zabo noma inzalo kulezo mboleko), usongo lokukhishwa ngebheyili nokukhishwa ngebheyili luhamba lubhuqa. Lokhu kusho ukuthi noma izwe ligcina ibhange (funda: okhokha intela) noma ukuthi imali esetshenziselwa ukonga ibhange.
Ngakho-ke mhlawumbe sizobona indiza eqinile yemali ibheke bitcoin negolide ezinyangeni ezizayo.
Kubikezelwa ukuthi indiza eya ku-bitcoin izoba enkulu kunayo yonke, ngoba awuthengi igolide ngokucindezela inkinobho. Uvule isikhwama se-bitcoin kungasiphi isikhathi futhi okubhange lakho namuhla kuzoba esikhwameni sakho se-bitcoin kusasa. Lokho kundiza kwe-bitcoin, kuhlanganiswe nenqubo yezimayini esekwe kuyo, kungenzeka kunikeze i-bitcoin isikhundla esinamandla samazwe omhlaba kangangokuba esinamandla okuthatha indawo yedola.
I-yuan yase-China ingambozwa yibhange eliphakathi lase China, kepha isizathu sokuthi igolide lisasebenza njenge-backup emhlabeni wonke lifihlwe kancane ukuthi kufanele ukhiphe igolide kimi. Kufanele uthole lokho emhlabathini ngomsebenzi wokumba ezimayini zegolide, okuyinqubo ebizayo nenamandla yabasebenzi futhi kukhona ukusweleka. Isisekelo sezimayini zeBitcoin sisekelwe emcabangweni ofanayo, njengoba kuchaziwe ku lesi sihloko.
Umthamo wokuthengiswa kwe-bitcoin emhlabeni wonke manje umkhulu kakhulu ukuthi abantu abaningi ngokwengeziwe kanye nabatshalizimali abakhulu bayayithanda futhi bayangena kuyo. Uma ungeza lelo qiniso ekunciphiseni imali okweqile kwe-hyper-time kanye nokwehla okungenzeka kwedola, kubonakala sengathi kwabaningi bitcoin kuzoba yindawo yokukhosela amabhomu. Ngakho-ke inamandla wokusetha indinganiso entsha yamazwe omhlaba futhi uma idola liwela, i-bitcoin ingathatha indawo yedola ngokwezinga le-IMF's SDR cryptocurrency.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: edition.cnn.com, ft.com, globalresearch.ca
Ngenkathi iTump iqhuba izimpi zayo, i-yuan yaseShayina ithatha isikhundla se-dollar ngokuphindaphindiwe
Umlando ukhombisa umjikelezo weminyaka engama-90 futhi zonke izinkomba zibonisa ukwehla okungathinteki okujulile
I-Venezuela iyisibonelo salokho esikulindeleyo naseYurophu kanye nokwethulwa kwe-cryptocurrency njengezinga lezwe
Njengoba iTump iphonsa amafutha emlilweni phezu kweNyakatho Korea, iJerusalema neVenezuela, amandla ashintshe empumalanga
Amathegi: futhi, ibhande, bitcoin, u-bri, china, Chinese, i-coronavirus, inkinga, dollar, e-RMB, afakiwe, ukwehla kwemali, isinyathelo, Umgwaqo, I-SDR, trump, Val, yuan
18 May 2020 ku-13: 22
Ngokubona kwami, okokuqala sizobona ukuhlukaniswa kwe-USD phakathi kwedola lomhlaba (petro) ne-USD yendawo ye-USA uqobo. Lezi zokugcina zizoshona kakhulu, njengesimo esinjengeVenezuela. Ukwehlukaniswa kwedola kuyingxenye yokusethwa kwemali kabusha, njengoba izwe ngalinye selitshale imali eningi yezakhamizi (ngohlobo lwemali lwasekhaya, olufana ne-Iniase rupees) ezokuphepha ezikweletini zase-US ohlelweni lwayo lwemalimboleko lwasebhange ukuze kuxhaswe ukuhweba kwamazwe aseNingizimu Melika. Amazwe ngakho-ke ngeke afune ukubona izimangalo zawo ze-USA z = ukuhwamuka ngenxa ye-hyperinflation, ngakho-ke umqondo wokuhlukana. Ngaphezu kwalokho, iChina inempahla engaphezu kwesigidi sezigidi zamasheya aseMelika. Uma iChina ifuna ukungahambi kahle ingaphonsa lesi sikweletu emakethe futhi uma kungenasidingo, i-FED kuyodingeka ukuthi ithenge lesi sikweletu esizobangela i-hyperinflation e-USA. Umugqa onzima kaTrump maqondana nempi yamanani entela ngakho-ke kubukeka kimi njengesigaba sokuthi izinkumbi zisebenzise ukusetshenzelwa kabusha kwezezimali. Ungakhohlwa ukuthi ukusetha kabusha kwezezimali kusho ukuthi kuzokhishwa isikweletu esiningi, ngoba uma kusethwa kabusha akukho phuzu ekufakeni isikweletu esibi ohlelweni lokuqothuka ohlelweni olusha. Uyacelwa ukuthi uqaphele, lokhu kuzosebenza eqenjini elikhethiwe hhayi ezimbolekweni noma kubantu abanezikweletu ezizimele, lokhu kuzoqhubeka kuhlelo olusha. Ngikholwa futhi ukuthi sizobona ukwazisa okukhulu ngedola laphesheya ngaphambi kokunyamalala endaweni yesehlakalo. Lokhu kukhuphuka kubangelwa imfuno yamadola yokuxazulula yonke inkimbinkimbi yokutholwa. Ngicabanga ukuthi lesi kuzoba yisikhathi lapho abadlali (amabhange namabhange aphakathi) bezothengisa isikweletu sabo saseMelika.
18 May 2020 ku-13: 55
IHydrogen inguquko yamandla ezayo futhi ezodala ushintsho lweparadigm. Impela ngaphandle kwemiphumela eqondile yezomnotho, cishe wonke amamodeli asuselwe kwimithombo yamandla yakudala angashiya iwindi.
Impi yokubambela phakathi kweChina neMelika isivele iyaqhubeka futhi izokwanda ngokushona nje kwesanda kubulawa inxusa laseChina kwa-Israyeli nezinsolo zezempilo. I Ukwakha-up amabutho e-South China Sea (Diego Garcia) Kufanele futhi ziqashwe.
Hong Kong kwaba zakudala CIA Otpor ukusebenza futhi yebo China uzophendula ngendlela yalo lapho sekuyisikhathi esifanele.
19 May 2020 ku-12: 59
@salmon, ke kuzoba Kuxhomeke isikhathi.
18 May 2020 ku-14: 45
unswinyo ngisho nangokwengeziwe, i-TSMC yinkampani yaseTaiwan nokuyinto ebucayi eChina.
Isivumelwano Esikhulu Kunazo Zonke Zamakhuphoni Ama-Chipmaker Ama-Hits Ukudiliva KuHuawei Njengama-Sanction Amasha Wase-US
18 May 2020 ku-18: 13
18 May 2020 ku-18: 14
18 May 2020 ku-20: 17
18 May 2020 ku-22: 05
Iphosta yase-Israel ekwi-4 chan ithe uShin Bet, uMossad 'ongaphakathi kwa-Israyeli, ubulele inxusa ngesicelo saseChina ngemuva kokuba uDu Wei ezame ukugwema futhi wabelana ngolwazi ngamalebula waseChina wokulwa nempi, wabe esephinda kabili.
19 May 2020 ku-07: 58
bona amavidiyo angenhla avela ku-ZIO kunengozi enkulu kakhulu ngabasolwa abajwayelekile.
21 May 2020 ku-16: 00
kahle, umsolwa ojwayelekile uBannon usevele ulindele ingxabano eqondiswayo ezayo neChina.
IBannon WarRoom - Izakhamizi zaseRiphabhlikhi yaseMelika
« Qondisa intando yeningi indlela enqamulelayo esuka ekuvimbekeni nasekuvuseleleni umnotho
Ngeke usakwazi ukungena esitolo uma unganikeli igama lakho nenombolo yenceku kwikhawunta futhi lokho kumane nje kuyisiqalo »
Ukuvakasha okuphelele: 2.442.652
UMartin Vrijland op I-iPhone ifihla uhlelo lokusebenza lwe-covid-19 ekuvuseleleni i-i-OS 13.5 kwakamuva
Sanne Lejuwaan op I-iPhone ifihla uhlelo lokusebenza lwe-covid-19 ekuvuseleleni i-i-OS 13.5 kwakamuva
USephus op UMaurice de Hond uthola ukungabi nalutho kwemizuzu eyodwa nohhafu (ividiyo)